Ole Gunnar Solskjaer Oo Toban Kalmadood Ugu Jawaabay Jose Mourinho Oo Waxyaabo Badan Ka Sheegay Manchester United - Raaso News Network ( RNN )
Home » CAYAARAHA CAALAMKA » Ole Gunnar Solskjaer Oo Toban Kalmadood Ugu Jawaabay Jose Mourinho Oo Waxyaabo Badan Ka Sheegay Manchester United
Posted by: Bakool Net in CAYAARAHA CAALAMKA 19/01/2019	0
Tababaraha ku-meelgaadhka ah ee Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa kelmado kooban kaga jawaabay waraysi uu shalay bixiyey Jose Mourinho oo uu kaga hadlay waqtigiisii Old Trafford, dhibaatooyinkii ay isla muteen laacibiintiisa, khilaafyadii jiray iyo arrimo ka qarsoonaa warbaahinta oo ka dhex jiray qolka lebbiska ee kooxdaas.
Waraysiga Mourinho oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo intii uu ka tegay shaqada Manchester United oo laga caydhiyey bishii December, ayaa waxa uu qayb ka mid ah ku amaanay tababare Ole Gunnar Solskjaer oo si ku-meelgaadh ah loogu dhiibay shaqada bannaanaatay kaddib caydhintiisii.
Jose Mourinho waxa uu tilmaamay in aan loo ogolayn inuu si toos ah uga hadlo xaaladda Manchester United intii uu tababaraha ahaa, iyadoo laga saxeexay heshiis lagu xaddidayo xorriyadiisa hadalka ee dhinaca warbaahinta.
Tababaraha reer Portugal waxa kale oo uu intii uu waraysigu socday sheegay inay jiraan ciyaartooyo awood leh oo ku dhex jira qolka lebbiska ee United.
Haddaba, shirkii jaraa’id ee maanta ee ka hor ciyaarta Brighton ayaa waxa lagu weydiiyey tababare Ole Gunnar Solskjaer inuu wax ka odhanayo hadallada kasoo yeedhay Jose Mourinho, waxaanu ka bixiyey jawaab kooban.
“Wax kasta oo uu sheegay ma faalayn karayo, laakiin anigu waan ku faraxsanahay la shaqaynta wiilashan. Intaas ayuun baan sheegi karayaa.” Sidaas waxa yidhi Ole Gunnar Solskjaer oo ka jawaabayay su’aal laga weydiiyey waraysigii Mourinho.
Tababaraha reer Portugal ee Mourinho ayaa waraysiga uu bixiyey waxa uu ku amaanay Ole Gunnar Solskjaer oo uu tilmaamay in marka la eego natiijooyinka uu keenay kulamadii uu shaqada joogay, in aanu dhibaatoon doonin.
Si kastaba ha ahaatee, Solskjaer ayaa u muuqday mid ka fogaanaya inuu jawaab toos ah siiyo Mourinho.
Previous: Imisa Kulan Oo Premier league Ah Ayuu Khabiirka Sky Sports Ee Pual Merson Uu Saxay Natiijadii Uu Kooxaha U Saadaali
Next: Kala Doorashadii Gonzalo Higuain Iyo Mesut Ozil Ee 2013, Kala Duwanaanshaha Xaalada Haatan & Arsenal Oo Qoomamayn Karta Marka Uu Higuain Kusoo Biiro Chelsea